Celebrities at the Inaugurattion
Getty ImagesActor Dustin Hoffman arrives on the inaugural stage ahead of the inauguration of Barack Obama as the 44th President of the United States of America on the West Front of the Capitol Tuesday in Washington, D.C. Obama becomes the first African-American to be elected to the office of President in the history of the United States.
Getty ImagesRep. Barney Frank (D-MA) stands on the inaugural stage ahead of the inauguration of Barack Obama as the 44th President of the United States of America on the West Front of the Capitol Tuesday in Washington, D.C. Obama becomes the first African-American to be elected to the office of President in the history of the United States.
Getty ImagesFormer Senator Mark Warner (D_VA) arrives on the inaugural stage ahead ofthe inauguration of Barack Obama as the 44th President of the United States of America on the West Front of the Capitol Tuesday in Washington, D.C. Obama becomes the first African-American to be elected to the office of President in the history of the United States.
Getty ImagesSean Combs arrives on the inaugural stage ahead of the inauguration of Barack Obama as the 44th President of the United States of America on the West Front of the Capitol Tuesday in Washington, D.C. Obama becomes the first African-American to be elected to the office of President in the history of the United States.
Getty ImagesBoxing promoter Don King arrives on the inaugural stage ahead of the inauguration of Barack Obama as the 44th President of the United States of America on the West Front of the Capitol Tuesday in Washington, D.C. Obama becomes the first African-American to be elected to the office of President in the history of the United States.